Nigerian Lives Matter: Really? | Breaking Travel News
Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Umba wobomi baseNigeria: Ngokwenyani?
Umba wobomi baseNigeria: Ngokwenyani?
Abaqhankqalazi abamsulwa abangama-56 badutyulwa ngumkhosi waseNigeria. Abemi bayoyika kwaye bazimele emakhayeni abo okanye ezitratweni besilwa.
Itwitter ithi: "Ukusukela namhlanje, ndifuna ukubongoza wonke umntu olapha. Ukuba ukhe ubone umntu obanjwe yi-SARS / SWAT, nceda ume, uqiniseke ukuba abamthathi loo mntu. Nceda, hlala kule ndawo, upake iimoto zakho, musa ukuqhuba okanye udlule. Nceda udlulise! #IINDLEKO . "
eTurboNews uthethe no-Abigel, umfundi osekwe eLagos. Unika ingxelo:
Ulutsha lwaseLagos eNigeria lwalukhalazela inkohlakalo yamapolisa nolawulo olubi kwaye besebenzisa ii-hashtag #EndSars #Endpolicebrutality #Endbadgovernance kule minyaka ilishumi idlulileyo eNigeria. Babize urhulumente ukuba amhlakazele, nto leyo ayenzileyo, kodwa kukho eminye imiba engapheliyo abathi bazisa nayo ngaphambili.
“Abawisi-mthetho bethu ngabona bantu bahlawulwa kakhulu emhlabeni, kodwa bayazishiya iiprojekthi zentlalo-ntle ezinokunceda abemi. Indlala, indlala kunye nentswela-ngqesho emhlabeni. Imicimbi emininzi, ”utshilo u-Abigel.
Ubuncinci abantu abangama-56 babhubhile eNigeria ukusukela oko #IINDLEKO Uqhanqalazo luqale nge-8 ka-Okthobha, kwaye i-38 ibulewe kwilizwe liphela ngolwe-Lwesibini kuphela, ngokweqela lamalungelo oluntu i-Amnesty International. Izidubedube zaqhubeka ngoLwesine xa kwakuvakala izithonga zompu kwindawo yabatyebileyo i-Ikoyi eLagos.
Umongameli waseNigeria, u-Muhammadu Buhari, ucele ukuba kupheliswe uqhankqalazo kwilizwe lonke ngokuchasene nobundlobongela bamapolisa kodwa wasilela ukukhankanya ngokuthe ngqo ukudutyulwa okubulalayo koqhankqalazo olunoxolo.
U-Buhari ucele abaqhankqalazi ukuba "basixhathise isilingo sokusetyenziswa zizinto ezinokubangela isiphithiphithi."
U-Abigel uqhubeke wathi: “Kule nkqubo yoqhankqalazo, umkhosi waseNigeria uvulele ngogonyamelo koqhankqalazo olusakhulayo uninzi lwabo lubulewe lwenzakala. Oku kubangele ukuwa kunye ne-mayhem, ukutshiswa, ukubulawa kwabantu, njl.
“Ulutsha luhleli kunye emhlabeni eLekki Tollgate eLagos apho bebehlanganisane khona kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Njengoko babehleli emhlabeni, babephethe iiflegi zesizwe ezandleni zabo becula umhobe wesizwe, ukanti amajoni awadubula.
“Kuyothusa kakhulu ukuba buhlungu kwam nokukhathazeka.
Akukho namnye owacaphukiswayo. Akukho nto, akukho nto. I-SARS ichithwe ilungile kodwa endaweni yokuba ibe nobuchule ekujonganeni neemfuno, i-FG iseke enye impahla yokhuseleko eyaziwa ngokuba yi-SWAT. Ke abantu baziva, 'wow yintoni ukungakhathali.' Oko kwabacaphukisa ngakumbi abemi. Kubekho umsindo omkhulu kubemi ngenxa yolawulo olubi kunye neemeko zokuphila ezibi. ”
UMongameli uthethe nabaqhankqalazi okokuqala emva kweeveki ezimbini.
Imiyalezo evela eAfrika iposwe kwiQela leBhodi yezoKhenketho yaseAfrika kubandakanya umyalezo ovela eKenya othi:
Ndimi kubumbano nabazalwana noodadewethu baseNigeria ngalo mzuzu unzima ngexesha. I-Afrika iyalila abantwana bayo # iinyanga #Nigerianlivesmatter 🇳🇬🇳🇬🇳🇬
UCuthbert Ncube, uSihlalo weBhodi yoKhenketho yaseAfrika uthe:
“Simi kubumbano nabantu baseNigeria. Sivakalisa uvelwano lwethu kwiintsapho zabo bathe baphulukana nobomi babo, kwaye sinovelwano kunye neminqweno emihle yokuphola kwabo benzakeleyo kunye nabo abo beshishini labo lonakalisiweyo laphangwa.
"Sifuna uxolo, ingakumbi xa sijonga indawo iNigeria eyithathileyo kweli lizwekazi njengoko iAfrika iqala ngokwakha ngokutsha, ukuvulwa kwakhona nokuqala kabusha kwezokhenketho."